Tenga Isotretinoin powder (4759-48-2) hplc≥98% | AASraw
/ Products / vamwe / Isotretinoin upfu
Rating: SKU: 4759-48-2. Category: vamwe
MUTSVENE unobatsira nekugadzira zvigadzirwa kubva kugiramu kusvika kuhuwandu hweIsotretinoin powder (4759-48-2), pasi peCGMP mutemo uye trackable quality control system.
Isotretinoin, inozivikanwawo se13-cis-retinoic acid, mushonga unonyanya kushandiswa kurapa acne. Kazhinji, inoshandiswa zvakare kudzivirira dzimwe kenza dzeganda (squamous-cell carcinoma), uye pakurapa kweimwe kanzira. Iyo inoshandiswa kurapa harlequin-mhando ichthyosis, inowanzo kuuraya chirwere cheganda, uye lamellar ichthyosis. Iyo isomer, tretinoin, zvakare iri acne mushonga.
Isotretinoino powder video
Raw Isotretinoin powder basic Characters
Molecular Kurema: 300.44
Color: Jaji kana kuti machena macristalline powder
Raw Isotretinoin kushandiswa kwehupfu
Raw Isotretinoin powder Mazita
Isotretinoin inonziwo Absorica, Accutane, Amnesteem, Isotretinoin (CAS 4759-48-2), Claravis, Sotret.
Raw Isotretinoin powder Usage
Kune vanhu vasiri vanhu, Isotretinoin inofanira kunge iri mumuromo inoshandiswa pa 0.25-0.5mg nguva, kaviri pazuva. Kunyanya 2mg pazuva, hapana kupfuura mavhiki e20.
Warning on Raw Isotretinoin powder
Iwe haubvumirwi kutora izvi Kana iwe unotevera chiratidzo:
 iwe weergergic kune chero chinhu chinoshandiswa mu isotretinoin kana kuti vitamini A
 iwe uri nepamuviri, ungava nepamuviri, kana kuti uri kuronga kuva nepamuviri
 uri kufudza.
Uye zvishoma zvishoma zvinosanganisira: Miromo yakaoma uye muromo, kuvhara maduku kwemaziso kana miromo, ganda rakanyanyisa, nosebleeds, kushungurudza mudumbu, kana kuonda kwebvudzi kunogona kuitika.
Isotretininoin inoshandiswa zvikuru kune yakasimba cystic acne uye acne iyo haina kupindura kune dzimwe mishonga.Mamwe dermatologists anotsigirawo kushandiswa kwayo pakushandisa zviduku zvinyorwa zvemakone zvinoratidza kusagadzikana kune mamwe marapirwo, kana izvo zvinobudisa kuora kwepanyama kana kwepfungwa.
Icho chinoshandawo kune hidradenitis suppurativa uye dzimwe mamiriro ekudengenyeka kwema rosacea. Inogonawo kushandiswa kubatsira kubata harlequin ichthyosis, lamellar ichthyosis uye inoshandiswa munyaya dze xeroderma pigmentosum kuti ibvise keratoses. Isotretretinoinhas yakashandiswa kurapa inonyanya kushandiswa mamiriro ezvinhu fibrodysplasia ossificans progressiva. Inoshandiswawo pakurapa kweeuroblastoma, chimiro chekenza yeropa.
Isotretretinoin therapy inowedzera kujekesa kuburikidza nehutachiona hwemagetsi mumashandisirwo ekuedza, asi haisati yashandiswa pakuratidza uku sezvo kune mishonga inoshanda. Isotretininoin inogona kureva imwe nzira yakachengetedza uye yakachengeteka inonzi systemic form oftherapy ye recalcitrant condylomata acuminata (RCA) yemukati. Munyika dzakawanda kurapwa ikozvino hakugamuchirwi uye kunoshandiswa chete kana mamwe marapirwo akakundikana.
Kutenga Isotretinoin powder (CAS 4759-48-2) kubva kuAASraw
17pi-Hydroxyprogesterone Acetate Powder (302-23-8)